အိုင်စီဂျေ အလွန် – Ye Htut's Blog
Posted byye htut January 24, 2020 Posted inGovernment, ICJ, RakhineTags:Rakhine, UN, yehtutarticle
မနေ့ ( ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ ၂၃ ) ရက်နေ့မှာ ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ကြားဖြတ် စီမံ ဆောင်ရွက်ချက်တွေ ချမှတ်ပေးဖို့ လေ ျှာက်ထားချက်အပေါ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ာ တရားရုံး ( ICJ) က ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တယ်။
ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက ကြားဖြတ်စီမံဆောင်ရွက်ချက် ချမှတ်ပေးဖို့ လေ ျှာက်ထားတဲ့အခါမှာ မြန်မာ နိုင်ငံဘက်က လိုက်နာဆောင်ရွက်ပေးဖို့ အစီအစဉ်ခြောက်ခု ကို တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ အဲဒီအထဲမှာ အမှတ်စဉ် ၁ နဲ့ ၂ က ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုလ ို့ ယူဆနိုင်တဲ့ အပြုအမှုတွေ မလုပ်ဖို့ ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ဆိုင်တယ်။ အမှတ်စဉ် ၃ သက်သေခံအထောက်အထားတွေ ဖျက်ဆီးခြင်းမပြုဖို့ နဲ့ဆိုင်တယ်။ အမှတ်စဉ် ၄ က နှစ်နိုင်ငံလုံးက အခြေအနေပိုဆိုးသွားစေမယ့်ကိစ္စတွေမလုပ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ။်
အမှတ်စဉ် ၅ က တကယ်လို့ ကြားဖြတ်စီမံဆောင်ရွက်ချက်ကို ချမှတ်လိုက်တယ်ဆိုရင် လေး လ အတွင်း ပြန်ပြီး အစီရင်ခံဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အမှတ်စဉ် ၆ ကတော့ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
တရားရုံးက ကြားဖြတ်စီမံဆောင်ရွက်ချက် ချမှတ်ဖို့ သဘောတူခဲ့ပြီး အမှတ်စဉ် ၁၊ ၂၊ ၃ နဲ့ ၅ ကို မြန်မာဘက်က လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ အမှတ်စဉ် ၄ နဲ့ ၆ ကိုတော့ လက် ရှိအခြေအနေမှာ မလိုအပ်ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။
အဲဒီအချက်လေးချက်အပြင် တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်ထဲမှာ အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေလည်း ပါသေး တယ်။ အဲဒါတွေကတော့
၁။ မြန်မာဘက်က လေ ျှာက်လဲခဲ့တဲ့ ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံဟာ အိုအိုင်စီအဖွဲ့ ကိုယ်စား ဆောင်ရွက်ေ န တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီလေ ျှာက်ထားချက်ကို လက်မခံသင့်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကို ပယ်ချခဲ့တယ်။
၂။ မြန်မာနဲ့ ဂမ်ဘီယာကြားမှာ အငြင်းပွားမှုမရှိဘူး ဆိုတဲ့ လေ ျှာက်ထားချက်ကိုလည်း ပယ်ချခဲ့ တယ်။ တရားရုံးက ၂၀၁၉ စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာ ဂမ်ဘီ ယာနိုင်ငံက ကုလသမဂ္ဂအချက်အလက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာတွေကြောင့် ဂမ်ဘီယာ နိုင်ငံ အနေနဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးကို လေ ျှာက်ထားမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ နောက်နှစ်ရက် အကြာမှာ မြန်မာနိုင်ငံက အထွေထွေညီလာခံမှာ အချက်အလက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ရဲ့ အစီရင်ခံစာ ဟာ ဘက်လိုက်တယ်၊ အချက်အလက်တွေမှားနေတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ ဒါ့ကြောင့် မြန်မာနဲ့ ဂမ်ဘီယာ နှစ်နိုင်ငံကြားမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး မတူ ညီတဲ့အမြင်တွေရှိနေတာအမှန်ပဲလို့ဆိုတယ်။
၃။ မြန်မာဘက်က ဂမ်ဘီယာစွပ်စွဲထားတဲ့ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုကိစ္စတွေမဖြစ်ပါဘူးလို့ ငြင်း ထားတယ်။ဒါပေမယ့်တရားရုံးကတော့ ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံရဲ့ စွပ်စွဲချက်ချို့ဟာ (လူမျိုးတုံး သတ် ဖြတ် မှုဆိုင်ရာ)ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းထဲမှာ အကျုံးဝင်နိုင်တယ်လို့ သုံးသပ်ထားတယ်။ ( In the Court’s view, at least some of the acts alleged by The Gambia are capable of falling within the provisions of the Convention.) အခုအမှုက လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု ဖြစ် ၊မ ဖြစ် ဆုံး ဖြတ် တဲ့ အဆင့် မဟုတ်တဲ့အတွက် ဒီလိုပြောလိုက်တာဟာ နည်းနည်းထူးခြားတယ်လို့ ခံစားမိတယ်။
တရားရုံးက အခုလို ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံရဲ့ လေ ျှာက်ထားချက်ကို လက်ခံပြီး ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်လိုက် တဲ့အတွက် မြန်မာဘက်က တောင်းဆိုထားတဲ့ ဂမ်ဘီယာလေ ျှာက်ထားချက်ကို အမှုစာရင်းထဲက နေပယ်ဖျက်ပေးဖို့ ၊ ဒါမှမဟုတ် ကြားဖြတ်စီမံဆောင်ရွက်ချက် အမိန့်ကို မထုတ်ပြန်ဖို့ ဆိုတဲ့ နှစ် ချက်လုံး ပယ်ချခံလိုက်ရတဲ့ သဘောဖြစ်သွားပါတယ်။
တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အစိုးရရဲ့ တုန့်ပြန်ချက်နှစ်ခုရှိတယ် –
၁။ ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့ မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားစကားဝိုင်းမှာ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဦးကျော်တင့်ဆွေ နဲ့ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်တွေက ကြားဖြတ်စီမံဆောင်ရွက်ချက် အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရင်တောင် စိတ်ပျက်စရာ၊ စိုးရိမ်စရာမလိုဘူး၊ ဒါဟာ ဘောလုံးပွဲ မစခင် ဒိုင်လူကြီး က ဒီလိုတာဝန်တွေရှိတယ်ဆိုပြီး ခေါ်ပြောတဲ့အဆင့်ပဲ။ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုဖြစ် မဖြစ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ဖို့ဆိုတဲ့အဆင့်က အချိန်ကြာဦးမယ် လို့ ပြောခဲ့တယ်။
၂။ ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ တရားရုံး ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို လိုက်နာမယ်လို့လည်း မပြောဘူး။ လက်မခံဘူးလို့လည်း မပြောဘူး။ တက် သာဆုတ်သာ ရှိတဲ့ “ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေဖြင့် မှတ်သားထားရှိသည်” လို့ပဲ ပြောထားတယ်။ နောက်ဆုံးအပိုဒ်မှာတော့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံးအနေနဲ့အကာအကွယ် ပေးရေး အစီအမံတွေချမှတ်ဖို့ပျက်ကွက်တယ်လို့ စွပ်စွဲခံရမှာ စိုးရိမ်တဲ့အတွက် ကြားဖြတ်စီမံ ဆောင်ရွက်ချက်များချမှတ်တဲ့ အစဉ်အလာရှိတယ်ဆိုတာကို ပြန်ညွှန်းထားတယ်။
အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ အစိုးရတုန့်ပြန်ချက်နှစ်ခုကို ကြည့်လိုက်ရင်တော့ ကြားဖြတ်စီမံဆောင်ရွက် ချက် ဆိုတာ ချမှတ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ မူလ အမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအပေါ်မှာ အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဘူး၊ သိတ်ပြီးစိုးရိမ်စရာမရှိဘူး ဆိုတဲ့ အယူအဆကို ဆွဲကိုင်ထားတယ်လို့ ခံစားမိတယ်။
ဒီအယူအဆဟာဥပဒေရှုထောင့်က သက်သက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ မှန်တယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံ ရေး၊ လုံခြုံရေး၊ စီးပွားရေး ရှုထောင့်တွေက ကြည့်ရင်တော့မမှန်ဘူး။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့
၁။ ဂမ်ဘီယာရဲ့ လေ ျှာက်ထားချက်ကို လက်ခံလိုက်တယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ကြားဖြတ်စီမံ ဆောင်ရွက်ချက်တွေ ချမှတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာ အမေရိကန် နဲ့ ဥရောပသမဂ္ဂတို့ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာမူဝါဒတွေအပေါ်မှာ အများကြီး သက်ရောက်မှုရှိနိုင်တယ်။ ဒီနေ့ပဲ ဥရောပ သမဂ္ဂက တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကြိုဆိုခဲ့ပြီး ရိုဟင်ဂျာတွေလုံခြုံစိတ်ချစွာပြန်လာနိုင်ဖို့ မြန်မာ နိုင်ငံကို တောင်းဆိုခဲ့တယ်။
၂။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမလုပ်ဖို့၊ မြန်မာနိုင်ငံက ထွက်ကုန်တွေ မဝယ်ဖို့ ဆိုတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ ပိုများလာရင် အနောက်အုပ်စု စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေရဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ၊ မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်တဲ့ ခရီးသွားတွေလျော့ကျသွားနိုင်တယ်။ အခုပဲ Boycott Myanmar Campaign ဆိုတာစနေပြီ။ ဒီလို ကန်ပိန်းလုပ်နေသူတွေအတွက် တရားရုံးဆုံးဖြတ် ချက်ဟာ လက်နက်ကောင်းတစ်ခုပဲ။
၃။ ကြားဖြတ်စီမံဆောင်ရွက်ချက်အမိန့်မှာ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုကို ဦးတည်စေတဲ့ ကိစ္စတွေ မဖြစ်အောင်တားဆီးရမယ်ဆိုတာပါ။ ကွန်ဗင်းရှင်းရဲ့ အနက်ဖွင့်ဆိုချက်အရဆိုရင် အဲဒါဟာ ရုပ်ပိုင်းရော၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်တွေပါပါဝင်တယ်။ အစိုးရရဲ့မူဝါဒတစ်ခုခု ၊ ဒါမှ မဟုတ်အာဆာအဖွဲ့ကနောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုခု လုပ်လာတဲ့အခါ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေ ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် အားလုံးဟာ ဒီအချက်နဲ့ ငြိစွန်းမှု မရှိအောင် လုပ်ရတော့မယ်။ ဒါဟာ ရခိုင် မြောက်ပိုင်းအရေးနဲ့ပတ်သက်ရင် အစိုးရဟာ လက်ကို ကြိုးချည်ခံထားရသလိုဖြစ်သွားတာ ပဲ။
မြန်မာနိုင်ငံက ဘာလုပ်မလဲ ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းတွေ ရဲ့ အရေးပါမှုကို အသိအမှတ်ပြုဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခေါင်းဆောင်တဲ့ အင်န် အယ်လ်ဒီပါတီက ၁၉ ၈၈ ကနေ ၂၀၁၁ အထိ ကုလသမဂ္ဂ ယန္တယားမျိုးစုံ နဲ့ နိုင်ငံတကာ အမြင် တွေကို အသုံးချပြီး တပ်မတော်အစိုးရကို ကောင်းကောင်းဖိအားပေးနိုင်ခဲ့တယ်။
ဒီအတွေ့အကြုံတွေရှိရဲ့သားနဲ့ အခုအချိန်ရောက်မှ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၊ လူ့အခွင့် အရေးကောင်စီ နဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးတို့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အလေးထား စရာ မလိုတဲ့သဘောမျိုး ပြောဆိုလာတာကို စဉ်းစားလို့မရဘူး။ အခုအချိန်ကျမှရခိုင်မြောက်ပိုင်းပြဿနာဟာ ပြည်တွင်းရေးသက်သက်ဖြစ်တယ်။ ပြည်တွင်းမှာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမယ်လို့လည်း ပြောလို့မရတော့ဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကိုဖီ အာနန် ကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး ကော်မရှင်ဖွဲ့ လေ့လာဖို့ တာဝန်ပေးတဲ့အချိန်က စပြီး ရခိုင်မြောက်ပိုင်း အရေး အခင်း ဟာ နိုင်ငံတကာ ပြဿနာဖြစ်သွားခဲ့ပြီ။ အဲဒီနောက်ပိုင်း ဒုက္ခသည် ခုနှစ်သိန်းကေ ျာ် ဘင်္ဂလား ဒေ့ရ်ှနိုင်ငံကို ရောက်သွားချိန် မှာတော့ ပြည်တွင်းရေးသက် သက်လို့ ပြောဖို့ ပို ခက် သွားပြီ။သမိုင်းကြောင်းတွေ၊ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆိုတာတွေထက် လူသားချင်း စာနာမှု သဘောတရားက ရှေ့တန်းကိုရောက်သွားပြီ။
ဘာလုပ်မလဲလို့ ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါ နောက်ပြဿနာတစ်ခုက ၂၀၂၀ ဟာ ရွေးကောက်ပွဲ နှစ် ဖြစ်နေ တာပဲ။ အစိုးရဖြစ်ဖြစ်၊ အတိုက်အခံပါတီတွေဖြစ်ဖြစ်၊ တပ်မတော်က ဖြစ်ဖြစ် ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုတဲ့ ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအခြေအနေအထိုင်ပေါ်ကနေ စဉ်းစားရင်တော့ မှန်ကန်တဲ့ အဖြေကိုရဖို့ မလွယ်ဘူး။
2 thoughts on “အိုင်စီဂျေ အလွန်”
Zaw Min Oo says:
ကိုဖီအာနန်ကော်မရှင်ကြောင့် ရခိုင်က နိုင်ငံတကာအရေးဖြစ်သွားတာကိုတော့သဘောမကျမိဘူး။
Sir. It’s very interesting and very important for Myanmar. “DASSK’s handling on Myanmar (The country which has living mostly Buddhists and also patriotic minded ppls) are totally out of track and wrong” that’s my personal thoughts sir.